[Gambar & Video] Budak Upahan UMNO Dicekup Ganggu Ceramah DSAI
‘Debate won’t solve Talam issue' - Chua Jr. Chicken!
The Ultimate Guide to Spot Farters
MK Snack Food, Old Town, PJ: Food for party pack
Posted: 14 Jul 2012 10:45 AM PDT
It's gonna be the longest bridge in South East Asia but sad that there's one have to pay toll to cross that bridge. Since it's long, you are gonna burn more fuel too. HAHA. How I wish there'saundersea tunnel on the other end of the Penang island. One more thing, it's expected to complete in November 2013, long way to go!
Posted: 14 Jul 2012 10:17 AM PDT
Terdapat gangguan budak-budak upahan telah menganggu perjalan ceramah dengan membuat bising dengan menonggang motor secara berkumpulan. Juga terdapat kejadian mencalar kereta-kereta hadiran oleh budak-budak tersebut.
Dan pihak keselamatan Parti telah berjaya menangkap seorang pemuda yang kemudian mengaku telah diupah oleh pihak parti lawan kemudian telah diserah kepada pihak Polis. -KedahKini
Posted: 14 Jul 2012 08:17 AM PDT
Najib 'ditelanjangkan' akhbar antarabangsa: Juara 'double-talk' kepada 'DEMOKRAT PALSU'
Walau bagaimanapun, ia tidak berkesan. Bukan sahaja Najib cuba menggunakan undang-undang zalim untuk mengukuhkan cengkaman kuasanya bertopengkan 'transformasi' malah dia telah diselar rakyat tempatan dan akhbar bereputasi tinggi di Kanada kini mengkategorikannya sebagai " demokrat palsu".
Posted: 14 Jul 2012 04:46 AM PDT
'Debate won't solve Talam issue' - The Star
As expected, Tee Yong CHICKENS OUT out Talam debate with Tony Pua
Posted: 14 Jul 2012 04:23 AM PDT
Posted: 14 Jul 2012 01:36 AM PDT
Kerajaan mesti mendengar tuntutan rakyat berhubung Felda," kata Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, lapor harakahdaily.
Posted: 13 Jul 2012 10:16 PM PDT
If not, if they continue to ignore the Rights of Minority Ethnic Nationals and Minority Religious groups, and especially if the Military led Present Government madeaU-Turn or backtrack the present Democratization process they could face the Bosnian Style Invasion and forced liberation of the States and Minorities.
I strongly believe in Integration and Cooperation but not in division.
I hope that the ASEAN would progress like EU to form an ASIAN UNION where there isareal Integration of all the people of ASEAN. Then only we could solve all the problems of Myanmar, Southern Thailand problem, Southern Philippine problem, Spratly Islands dispute etc.
If we manage to extend ASEAN +++ concept, Eastern Indian States' rebellion problems and Tibet problem could be partly solved as with the blessings of parent mother countries, all the people of ASEAN +++ could migrate, work, invest or trade freely anywhere away from the perceived oppressors.
Posted: 13 Jul 2012 09:32 PM PDT
The wife and me were expecting to have an easy morning prior to race day tonight but somehow that was not going to happen. we discovered the house looked likeagarbage dump, in factagarbage dump is so much cleaner.
Took us the entire morning just to get the house in order and now I feel like I've just been throughahalf marathon! It's not going to be an easy run tonight, that's for sure. The sun is also out in its majestic glory and I'm sure it's going to beahot night, what with close to 4,000 other runners running along side.
Oh well I guess I shouldn't be complaining, at least the chores are done and I can take the rest of the day off and rest until later this evening where I'll be heading out to the race location early to getanice parking spot.
The Men's Health Shape Night Run tonight is like an anniversary run for the wife and me. It was basically this run, three years ago when we both ran together for the first time. This was the race that got the wife hooked on running and also rekindled my passion for the sport.
My new GOrun Ride as modeled by that cute lil diva ...
Since it's our 'anniversary' run, I think I'll look up some chocolate anniversary presents by Shari's Berries, that is seeing if I can still walk after the run ... LOL! I have another race the very next morning, the BHP Orange run, which right now looks likeaDNS. I don't even know why I register for back to back runs when I'm not sure of being able to even wake up for the next run!
ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ရဲ့ "ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂)" မှာ ကျွန်တော့် ရဲ့ယခင် note ပါ အရေးအသားအချို့ကို ညီငယ်နားလည်မှု လွဲမှားပြီး ပြန်ဆွေးနွေးထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ မရ်မာ (Marma) လူမျိုးတွေ ဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်လက်ခံထားပြီးသားပါ။ ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတို့ထက်စောပြီး စစ်တကောင်းမှာ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ လည်း ကျွန်တော် မပြောခဲ့ပါ။ ညီငယ် မှားဖတ်မိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မရ်မာလူမျိုး တွေ ဘယ်အချိန်က စပြီး ဘင်္ဂလားမှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုရေးသား ခဲ့ရာမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်း နဲ့ ဘင်္ဂလားစွယ်စုံကျမ်းတို့မှာပါတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်
ကျွန်တော့်ဖက်က တစ်စုံတစ်ရာ ယူဆပြောဆိုရေးသားခဲ့တာမဟုတ် ပါဘူး။ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်း နဲ့ ဘင်္ဂလားစွယ်စုံကျမ်းတို့မှာပါတဲ့ အဖွင့်ကို အတည်ယူရင်တော့ရခိုင် တွေ ဘင်္ဂလားမှာ အစုလိုက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တာ ထက် အရင် ဘင်္ဂါလီ တွေ ဟာ ရခိုင်မှာအစုလိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ယူဆရမှာပါဘဲ။ ဒါက စာပေအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေ အရ ယူဆချက် ပါ။ ဘင်္ဂလား ကို အစ္စလာမ် ဘာသာမရောက်ခင်ကတည်းက ရခိုင်ဘုရင်တွေဟာ ဘင်္ဂလားနယ် အချို့ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်ကြားဖူးရုံကြားဖူးပါတယ်။ သမိုင်းအထောက်အထား အနေနဲ့တော့စာပေတွေမှာ မတွေ့မိပါဘူး။ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမမှီလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသမိုင်းအထောက်အထားကို ကျွန်တော်မှတ်သားထားချင်တဲ့အတွက် ညီငယ် မှာ ကျမ်းအကိုး အကားရှိရင် ဖော်ပြပေးပါခင်ဗျာ။ ဘင်္ဂလား ကို အစ္စလာမ် ဘာသာ စရောက်ရှိခဲ့တာ ၁၃ ရာစု အဦးပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ ဖတ်ရှုမှတ်သားဖူးပါတယ်။
မရမ္မာလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညီငယ် က ဝီကီပေးဒီးယား ကို အထောက်အထားပြုရေးသား ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဝီကီပေးဒီးယား မှာ ရှာကြည့်တော့ ညီငယ်ပြောတဲ့ မရမ္မာလူမျိုးအကြောင်းတွေ့ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ မှာ ရေးသားထားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Ref အနေနဲ့ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းကိုဘဲညွှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းမှာ အဲဒီလောက် detail မပါပါဘူး။ ပြီးတော့ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်း မှာ က ရခိုင် မရ်မာတွေ ဟာအေဒီ (၁၈) ရာစု မှာ မြန်မာဘုရင်တွေ ရခိုင်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မှ ဘင်္ဂလား ကို ကူးပြောင်းရောက် ရှိအခြေချနေထိုင် ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီငယ်ရေးတာတွေ ကိုဖတ်ရင်း သေချာပြန်တွေးကြည့်တော့ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမရ်မာတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာအခြေ ချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကာလ ဟာ (၁၈) ရာစုထက်တော့ စောလိမ့်မယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ ဝီကီ ကလည်း ကျမ်းအထောက်အထားမပေးပေမဲ့ detail ရေးထားတာဆိုတော့….အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် လက်လှမ်း မှီတဲ့ History of Chittagong Volume (2) ကို ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း….Chapter (I) Land and People ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် စာ-၆ မှာ မရ်မာ (ရခိုင်) တွေဟာ (၁၈) ရာစုရဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ မှ စစ်တကောင်းကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြောင်း ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပိုပြီး သေချာအောင်လို့ Eastern Bengal District Gazetteers Chittagong (1908) ကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ရခိုင်မာဂ် တွေဟာ ၁၈ ရာစု ကမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရောက် ရှိလာခဲ့ တယ်လို့ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေ့ပြီးတော့လည်း စိတ်ထဲဘဝင်မကျသေး
ပါဘူး။ Eastern Bengal and Assam District Gazetteers Chittagong Hill Tracts (1909)
ကို လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ…..The Tribes ခေါင်းစဉ်အောက်၊ စာ-၂၈ မှာ Magh အကြောင်း
ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ညီငယ် ကိုးကားတဲ့ ဝီကီ မှာရေးထားသလို ရခိုင်ဘုရင် ဟာ
၁၅၉၉ မှာ ဟံသာဝတီကို စစ်ပြုအောင်မြင်ကြောင်းအစပြုပြီး Magh Bohmong သမိုင်းကြောင်း
ကိုရေးထားတာတွေ့ရပါတော့တယ်။ အများဗဟုသုတ အတွက် အဲဒီမှာ ရေးထားတာလေးကို
"အေဒီ ၁၅၉၉ မှာ ဗမာဘုရင် ဟာ Kindonja နဲ့ Tachaja လို့ အမည်ရကြတဲ့ သံအရာရှိ
နှစ်ဦး ကို လက်ဆောင်တွေနဲ့တကွ ရခိုင်ဘုရင် မင်းရာဇာကြီး ထံစေလွှတ်ခဲ့ပြီး ပဲခူးဘုရင်
ကို တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုကူညီတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်
လာဘ်လာဘ များစွာဆက်သမဲ့အကြောင်းလည်း ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ မင်းရာဇာကြီး ဟာ
ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပြီး အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တလိုင်းမိသားစုပေါင်း၃၃,၀၀၀ နဲ့ တကွ
ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပဲခူးဘုရင်ရဲ့ သားနဲ့သမီးကို ရခိုင်ဘုရင်အားဆက်သခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ဘုရင်ဟာ
ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ သုံ့ပန်းမင်းသမီးကိုစွဲမက်ပြီး ထိမ်းမြားခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ဖတော်ကို
တော့ စစ်တကောင်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရာ ၁၆၁၄ မှာ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့
ဆက်ခံမှု (၃) ဆက်ရောက်တော့ Angunya ရဲ့သား Hario ဟာ စစ်တကောင်းဘုရင်ခံ
ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၁၇၁၀ မှာ ရခိုင်ဘုရင် Ujia နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မောင်းကြီး
(ဗိုလ်မင်းကြီး) (Bohmongri) title ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ Hario ရဲ့ သား Sadafru
ဟာ သူ့လက်ထက်မှာဘဲ ကွယ်လွန်သွားလို့ Hario ရဲ့မြေး Konglafru (ကောင်းလှဖြူ)
က ဗိုလ်မင်းဘွဲ့ကို ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ (၁၇၅၆) မှာ ဗိုလ်မင်းကောင်းလှဖြူ ကို မဂိုတွေ
ကနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ရခိုင်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ဘုရင် ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် (၁၇၇၄)
မှာ ဗိုလ်မင်းကောင်းလှဖြူ နဲ့နောက်လိုက်တွေ ဟာ စစ်တကောင်းခရိုင်ကို တိမ်းရှောင်
ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာစစ်တကောင်း ခရိုင်ဟာ ဗြိတိသျှလက်အောက်ကို
ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ Ramu, Edghar နဲ့ Matamuri မြစ်တို့မှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး နောက်
ဆုံး (၁၈၀၄) မှာ Sangu မြစ် Maxikhal မှာ အခြေချခဲ့ပါတယ်။" (တစ်ချို့နာမည်တွေ
က တော့ ကျွန်တော်လဲ မြန်မာလို အသံလှယ်ပြီး မရေးတတ်တဲ့ အတွက်စာအုပ်ထဲပါတဲ့
အတိုင်း ဘဲ ရေးပြထားတာပါ။)
ဒါတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင် မရ်မာ တွေ Bangladesh မှာ စအခြေချနေ
ထိုင်ခဲ့တာ ဟာ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းနဲ့ ဘင်္ဂလားစွယ်စုံကျမ်းတို့ မှာ ပြထားတဲ့ (၁၈) ရာစု
မဟုတ်ဘဲ၊ (၁၆) ရာစုအကုန် (၁၇) ရာစုဦးပိုင်း ဆိုတာသိရပါပြီ။ အဲ့ဒီစွယ်စုံကျမ်းတွေ
က Francis Buchanan ၊ Eastern Bengal District Gazetteers Chittagong (1908)
တို့ကို အကိုးအကားယူရေးထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (ညီငယ်အနေနဲ့ ဝီကီ မှာ article
တွေ တင်တဲ့သူတွေနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိရင် အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ Eastern
Bengal and Assam District Gazetteers Chittagong Hill Tracts (1909) ကို Ref
စစ်တကောင်း ကို ရခိုင်မင်းတွေ အုပ်စိုးခဲ့တာ သမိုင်းအမှန်ပါဘဲ။ ပါးစပ်ရာဇဝင်လို့ ကျွန်
တော် မဆိုခဲ့မိပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားမြို့တစ်မြို့ ကို သိမ်းပိုက်ပြီးရင် မြို့စောင့်တပ် ထားမှာ
ပါဘဲ။ ညီငယ်ပြောထားသလို အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေ၊ အခွန်အတုပ် အရာရှိဝန်ထမ်းတွေ၊
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ဖို့ လူဦးရေ အသင့်အတင့် ထားမှာပါဘဲ။ ညီငယ် ကိုးကား
ပြထားတဲ့ ဒေါက်တာထင်အောင်ရဲ့ History of Burma စာအုပ်ပါတင်ပြချက်ကို ကျွန်တော်
လည်း သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိပြုရမှာက ရခိုင်မင်းတွေ စစ်တကောင်း port ကို
စတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ် ဟာ ၁၄၅၉ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး၊ မြောက်ဦး ကို ဘင်္ဂါလီ တွေစတင်ရောက်
ရှိ အခြေချခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ဟာ ၁၄၃၀ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့
"သမိုင်းတွေကို ကျကျနန ခြေရာကောက် ကြည့်မယ် ဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘင်္ဂလား မှာ
စတင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ထက် ဘင်္ဂါလီ တွေရခိုင်ကို စတင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ် က
ပိုလို့တောင်စောနေပါသေးတယ်။" ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ မလွဲတဲ့ အပြင်ပိုပြီးခိုင်မာလာကြောင်း
သိရမှာပါ။ နောက်တစ်ချက် ကျွန်တော် သုံးသပ်ပြချင်တာ က အဲဒီကာလတုန်းက
မင်းနေပြည်တည်ရာ ရခိုင်ပြည်နဲ့ ရခိုင်ပြည်လက်အောက်ခံ စစ်တကောင်းတို့အကြား
ကုန်သွယ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ညီငယ် ကိုးကားပြတဲ့ Arakan and Bengal : the rise
and decline of the Mrauk U kingdom (Burma) from the fifteenth to the
seventeenth century AD ဆိုတဲ့ ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း Chapter (8) Trade and Taxation
ကို ရှုပါ။) အဲဒီလို ရှိခဲ့တဲ့ အတွက် နှစ်ဖက်ကုန်သည်တွေဟာဟိုဖက်ဒီဖက် အခြေချနေထိုင်
မှုတွေ ရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။။ နောက်အချက်တစ်ချက် က ရခိုင်ပြည် ဝေသာလီ ခေတ် က တည်း
ကို က အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုဟာ ရခိုင်ပြည် ကို လွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ရခိုင်ပြည်
နဲ့ အနီးဆုံးအိန္ဒိယ နယ်ဟာ ဘင်္ဂလားနယ် ပါ။ ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းတယ်ဆို က တည်း က
ဘင်္ဂလားနယ်က ဘင်္ဂါလီတွေ ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ ဝင်ရောက်ကူးလူးဆက်ဆံ နေထိုင်ခဲ့မှု တွေ
ရှိခဲ့လို့ဘဲ ဆိုတာ အသာလေးတွေးကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ ရှေးကတည်း က အခြေချနေထိုင်မှု တွေ ရှိခဲ့ကြောင်း
ကျွန်တော် ရေးပြနေတာဟာ ဘင်္ဂါလီ တွေကို တိုင်းရင်းသားလုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးတစ်မျိုးကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
မသတ်မှတ်ခြင်း ဟာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်
ချက်ပါလို့ ကျွန်တော် ခံယူပြီးသားပါခင်ဗျာ။
ရခိုင်လူမျိုး ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး ဦးရွှေဇံ က ဘင်္ဂါလီ တွေကို ဘယ်လိုသုံးသပ်
ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားညီငယ်ပေးလို့ ကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်။ ဆရာကြီး က
အဲဒီလိုသုံးသပ်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပြတဲ့ Golden Mrauk-U, An Ancient
Capital Of Rakhine မှာလည်း ဆရာကြီး က ဘင်္ဂါလီတွေ ကို "Nationals" လို့သုံးနှုန်းသွား
တာ အမှန်ပါဘဲ။ ဆရာကြီး က တစ်နေရာမှာ တစ်မျိုး၊ နောက်တစ်နေရာမှာ တစ်မျိုး ဘာကြောင့်
များ ရေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။
ညီငယ် ရေးထားတာ က " မြောက်ဦးခေတ်မှာ ဘင်္ဂလီတွေဟာ စစ်သုံ့ပန့်၊ကျွန်အဖြစ် ရောက်
ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမန်တွေလို ဘုရင်ကသူကောင်းပြု နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။"
မြောက်ဦးနိုင်ငံတော် ကို တည်ထောင်ဖို့ ဘင်္ဂါလီ တွေ က မင်းစောမွန်ကို အကူအညီပေးခဲ့တာ
တွေ၊ မင်းစောမွန်က အခြေချဖို့နေရာပေးခဲ့တာတွေ၊ ဗလီဆောက်ပေးခဲ့တာတွေ၊ အစ္စလာမ်
ဘာသာဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့တာတွေ အကိုးအကားအခိုင်အမာတွေနဲ့
ကျွန်တော်ရေးပြပြီးပြီမို့ ထပ်မရေးပြတော့ပါဘူးနော်။ ကမန် အကြောင်းတော့ နည်းနည်းရေး
ချင်ပါတယ်။ ကိုမြတ်သိန်းထွန်းက "မြေဒူးမွတ်စလင်တွေ" ကို ဘင်္ဂါလီလို့ ဆိုခဲ့ပြီး၊ အခု လည်း
"ကမန်" တွေကို "ဘင်္ဂါလီ" လို့ဆိုထားသယောင် ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တာ
မှန်ချင်မှ မှန်မှာပါ။ သို့သော်စာဖတ်သူတွေ ဗဟုသုတ အတွက် နည်းနည်းရေးပြပါရစေ။
"ကမန်" တွေ ဟာ မဂိုမင်းသားရှာရှုဂျာ က ရခိုင်ဘုရင်ထံ ခိုလှုံခဲ့တုန်း က လိုက်ပါလာတဲ့ မဂို
ပါရှန်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း မျက်နှာဖြူပညာရှင်ကြီး တွေ က ရေးသားကြပါတယ်။ သို့သော်
မြန်မာပြည် က စာရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်ဆန္ဒ (လယ်ဝေး) ရေးသားတဲ့ "ကမန်မျိုး
နွယ်စု သမိုင်း" စာအုပ်မှာတော့ ကမန်တွေ ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားက ကူးလာအခြေချခဲ့ကြတဲ့
လူမျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရခိုင်တွေ သာဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်
အကျယ်တဝင့်ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောင်ဆန္ဒ (လယ်ဝေး) ရဲ့ အထောက်
အထားတွေ အရကြည့်ရင် ကမန် လူမျိုးတွေ ဟာ ရခိုင်ဘုရင် က သူကောင်းပြုပြီး နိုင်ငံ
သားဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့လို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ မျက်နှာဖြူ ပညာရှင်တွေ
ရဲ့ အရေးအသား အရ ကြည့်ရင် လည်းသူတို့ဟာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးမဟုတ်ကြောင်း ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာ မရ်မာတွေ ဟာ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ယှဉ်ရင် မပြောပလောက်
စရာလူနည်းစု လေးဖြစ်ပေမဲ့၊ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဘာပြဿနာ မှ မရှိဘဲ အေးအေးလူလူ နဲ့
တိုင်းပြည်ကို သစ္စာရှိရှိနေထိုင်သူတွေပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ
ကိုယ်တိုင် က သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ထားပြီး သူတို့ဒေသကိုအုပ်ချုပ်
ဖို့ဗိုလ်မင်း တွေကိုဘဲ တာဝန်ပေးထားတာပါ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီတွေဟာ
ရခိုင်မရ်မာလူမျိုးစု အပေါ် ဘယ်လောက်သဘောထားကြီးလဲ ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
မုဂျာဟစ်လူဆိုးတစ်စု က လွဲလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာလည်း
တစ်စင်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင် အထိရခိုင်
လူမျိုးတွေ နဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ အကြားဘာပြဿနာ မှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ ညီငယ်လည်းသဘော
တူ ထားပြီးသာပါ။ စ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုန်း က လည်း ဘင်္ဂါလီ တွေစတာ၊ ရခိုင်တွေစတာ
လို့ ပြောလို့မှ မရတာ။ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာအေးချမ်း ဆိုရင် ဘင်္ဂါလီ
တွေ သတ်လို့ ရခိုင်တွေ သေဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ ကိစ္စ မှာ အပြစ်ရှိသူဟာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရဘဲ
လို့တောင် ဖွင့်ဟရေးသားခဲ့တာ။ ညီငယ် ပြောတဲ့ " နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကြာကြာ
နေထိုင်ခဲ့တယ်ပြောပြော ဧည့်သည်ဟာ အိမ်သားဖြစ်ချင်ရင် အိမ်ရှင်ကိုလေးစားဖို့ မဖြစ်
မနေလိုအပ်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ကျွန်တော်လုံးဝ ကိုသဘောတူပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘင်္ဂါလီ တွေ အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည် မှာနေချင်ရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုချစ်ရပါမယ် ၊
ရခိုင်ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ စတာတွေကို လေးစားရပါမယ်။
တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ ဘယ်လူမျိုးမဆို မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံသားအဖြစ် သစ္စာရှိရှိ နေမယ်
ဆိုရင် မြန်မာပြည် နဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို ချစ်တတ်ရပါမယ်။ မှန်ပါတယ် ညီငယ်၊
ထောက်ခံပါတယ်၊ လူနည်းစုအခွင့်အရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြောချင်ရင် တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့
အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို မထိခိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတချို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ညီငယ် ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်
ဘာသာမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ စည်းကမ်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အဲဒီစည်း
ကမ်း က အနက်ရောင်ခြုံရမယ်၊ မျက်နှာဖုံးရမယ် လို့ မပြဋ္ဌာန်းထားပါဘူး။ အဓိက က
တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှ၊ တစ်နည်းပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း၊ ဆံကေသာ
အလှ မပေါ်အောင်ဆင်ယင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-မြန်မာရင်ဖုံးလက်ရှည်၊ ပုဝါခေါင်းဆောင်း
နဲ့ မြန်မာ့ထမီဝတ်တာဟာ အစ္စလာမ် က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ အမျိုး
သားတွေ တိုက်ပုံ၊လုံချည် ၊ ခေါင်းပေါင်း ဆင်ယင် တာကိုလည်း အစ္စလာမ့်နည်းကျတဲ့ဝတ်
စုံပါဘဲ။ အစ္စလာမ် သာသနာက လူမျိုးစုံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တန်ဖိုးထားခိုင်းပါတယ်။
မွတ်စလင်ဝတ်စုံဆိုတာသီးခြားမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် က မြန်မာ့တိုက်ပုံ နဲ့ မြန်မာ
လုံချည်၊ အထူးသဖြင့် ရခိုင်လုံချည်ဝတ်ဆင်ရတာကို အထူးနှစ်သက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကုရ်အာန်ကျမ်းထဲ က အဆုံးအမတွေ တင်ပြတယ်ဆိုတာ က အစ္စလာမ်
ဘာသာရဲ့ သင်ကြားချက်တွေကို ညီငယ်အပါအဝင် ကျန်တဲ့ ရောင်းရင်းတွေကို သိစေ
ချင်လို့ပါ။ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမ နဲ့ လျော်ညီစွာနေထိုင်သူတွေရှိသလို ဘာသာ
အဆုံးအမက တစ်ခြား၊ လူကတစ်ခြားနေထိုင်သူတွေ ဟာ ဘာသာတရားတိုင်းလိုလို
မှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာ က ကျွန်တော်တို့ ကလောင်ကို အသုံးချပြီး
သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမတွေကို များများဖြန့်ချီဖို့ပါလို့ မြင်ပါတယ်။
လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ် မှာရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေထဲမှာ ကျွန်တော် အထက်မှာတင်ပြခဲ့သလို
ရှေးကတည်း က ရခိုင်နိုင်ငံတော်မှာ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ က ဆင်းသက်လာ
သူတွေလည်းရှိတဲ့ အတွက် အားလုံးကို ရခိုင်ဒေသ ကနေ ဖယ်ရှားပစ်မှာ ကိုတော့
သဘောမတူပါဘူး။ သို့သော် အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် က ပြည်ထောင်စု
သားတွေ အားလုံးနဲ့အတူတကွ ရပ်တည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမွတ်စလင် တစ်ဦး
အနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောလိုတာကတော့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ကြ
တဲ့ သူတွေကိုစနစ်တကျ ရွေးစစ်ပြီး တစ်နည်းနည်းစီစဉ်ပေးတာ (ဘင်္ဂလားပြန်ပို့သင့်ပို့၊
တတိယနိုင်ငံပို့သင့်ပို့) ကိုဘဲ လိုလားပါတယ်။
ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်းနဲ့ အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရိုးသားစွာဆွေးနွေး
ခွင့်ရတာကို အတော်ဘဲ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး ရဲ့ အနာဂတ်
ကောင်းစားရေးကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးစလုံး အလေးထားသလို ကျွန်တော်တို့လိုဘဲ
အလေးထားသူတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တွေအကြား အမြောက်အများ
ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ အထူးဘဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်။ ဘာသာ
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကြား ခါးသီးတဲ့ အမုန်းတရားကို ဖြန့်ချီနေကြတဲ့သူတွေအမြင် ရကြဖို့၊
"အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ" လို မဟုတ်မတရားဝါဒဖြန့်communal riot ကို
ဖန်တီးနေတဲ့ အဆင့်အတန်းမဲ့ စာပေတွေ ပျောက်ကွယ်ဖို့၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ တရားဝင်
ဘင်္ဂါလီတွေ အကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေ ဖြစ်တည်လာပါစေ
လို့ ရင်ထဲမှာ ဆန္ဒရှိတဲ့ အကြောင်းရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားရင်း….
ညီငယ်နဲ့တကွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေ အားလုံး
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကုံလုံ နိုင်ကြပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးကို
ဦးဆွေးဆံမြေ့ သစ္စာရှိစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း အလေးအနက်ဆန္ဒပြု ဆုမွန်တောင်းခံ
ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ ညီငယ်ရဲ့ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း။
>ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၁)
ရဲရင့်သစ္စာ – ကို Myat Thein Tun အားဖြေကြားခြင်း
ကိုမြတ်သိန်းထွန်း .. ကိုရဲရင့်သစ္စာသို့ ပြန်ကြားချက်
ရဲရင့်သစ္စာ – သမိုင်းတို့အားပြန်လှန်ကြည့်ခြင်း
ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ကိုရဲရင့်သစ္စာသို့ ပြန်ကြားချက် (၂)
ရဲရင့်သစ္စာ – သမိုင်းအမှန်တို့အသံမြည်လေသော်
ကိုမြတ်သိန်းထွန်းဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း(၁)
ကိုမြတ်သိန်းထွန်းဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း(၂)
Posted: 13 Jul 2012 10:07 PM PDT
"Pemeriksaan lanjut menemui seorang wanita memakai baju serta berseluar pendek sedang berselimut di atas tilam dalam bilik berkenaan," katanya.
Posted: 13 Jul 2012 09:16 PM PDT
အပေါင်းတို့အား "မင်္ဂလာပါ" လို့ ဦးစွာပထမ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
ကိုမြတ်သိန်းထွန်းရဲ့ ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးချက်တွေ ဟာလည်းဘဲ အရင်အခါတွေ အတိုင်း အလွန်ကောင်း
မွန်လှပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ရိုးရိုးသားသားဆွေးနွေးထားတဲ့အပြင်၊ ဆွေး
နွေးရာအချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာ ကို မိမိ သဘောမတူရင် မတူကြောင်း ရိုးသားပွင့်လင်း
ပြတ်သားစွာ ဖွင့်ဟတတ်တဲ့ စရိုက်လေးကို အထူးသဘောကျမိသလို ကိုမြတ်သိန်းထွန်းလို
ရိုးသားပွင့်လင်းလှတဲ့ လူတွေ သမိုင်းပညာရှင်များထဲမှာ များများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ ရင်ထဲမှာ
လှိုက်လှဲတဲ့ဆန္ဒ တစ်ခုဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် facebook စသုံး ကတည်း က သုံးဦးသော
ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး တစ်ဦး က တော့ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သုံးဦး
သော ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာ အသက်ရွယ်အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဦးဘိုကျော်ငြိမ်းဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ ဆွေးနွေး
ဖက်က တော့ လေးစားအပ်တဲ့ ကို James Mmt ၊ တတိယဆွေးနွေးဖက် က တော့ လေးစား
အပ်တဲ့ ကိုမြတ်သိန်းထွန်းပါ။ သုံးဦးသော ပုဂ္ဂိုလ် ထဲမှာ ကျွန်တော် အလေးစားဆုံး က ဘယ်
သူလဲ ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ ကိုမြတ်သိန်းထွန်းပါဘဲ။ ပညာရှင် တစ်ဦးမဟုတ်သော်ငြားလဲ
ပညာရှင် ဆိုသူ အချို့တွေမှာတောင် မရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးသားမှု၊ နှိမ့်ချမှု၊ သစ္စာရှိမှု တွေ
ဟာ ကိုမြတ်သိန်းထွန်း မှာ ရှိနေတာကို ခံစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦး
မဟုတ်သော်လည်းပဲ သမိုင်းအပေါ်သစ္စာတည်ချင်တဲ့ ရဲရင့်သစ္စာ ဟာ မိမိ နဲ့ ယုံကြည်ကိုး
ကွယ်ရာ ဘာသာအယူဝါဒ မတူညီတဲ့ ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ကို online ညီငယ် တစ်ဦးအဖြစ်
အသိအမှတ်ပြုထားကြောင်း မိတ်ဆွေများနဲ့တကွ လေ့လာသူအပေါင်းကိုသက်သေထား
ဖွင့်ဟဝန်ခံလိုပါတယ်။ ညီငယ် အနေနဲ့ အလုပ်တစ်ဖက် နဲ့ မအားမလပ်တဲ့ကြား က အချိန်
လုရေးသားနေရတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်
လဲ ညီငယ်လိုဘဲ အချိန်အတော်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားလေ့လာဆည်းပူး ရေးသားနေရတာဖြစ်တဲ့
အတွက် ညီငယ် ရဲ့အခက်အခဲကို ကိုယ်တွေ့ပမာ နားလည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်
ကျွန်တော် ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာမှာ ရက်တော်တော်ကြာကြာ ယူလိုက်ရတာကိုဘဲ ကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် အခုလောက်ဆွေးနွေးလာတဲ့ အထိ ညီငယ် နဲ့ ကျွန်တော့် ကြားမှာ သဘောတူ
ညီမှုမရနိုင်သေးတဲ့ အဓိက ပင်မ အချက် က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ ရခိုင်မှာ အခြေချနေထိုင်ခြင်း
အကြောင်းပါဘဲ။ ညီငယ် ရေးခဲ့တာ တင်ပြပုံအားနည်းလို့လည်း မဟုတ်ပါ၊ ညီငယ်ရေးခဲ့တဲ့
"ခုကျွန်တော်ပြောသွားသမျှအချက်တွေဟာ……… စိမ့်ဝင်ရောနှောသွားခဲ့ပါတယ်။" အပိုဒ်ကို
ကျွန်တော်မျက်စိလျှမ်းသွားတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ညီငယ် နဲ့ ကျွန်တော် တို့ အကြားဆက်
လက်ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းအရာတွေ ကို ကျွန်တော် နံပါတ်စဉ်လေးတွေ တပ်ပြီး summarize
လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော် summarize လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ညီငယ်အနေနဲ့
အဲဒီ summary အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာ သဘောတူမှု မရှိရင် ပြန်လည်ပြောကြားပေးပါ။
၁။ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ ဟာ ရခိုင်ဒေသမှာကိုလိုနီခေတ်မတိုင်ခင် ရှေးရခိုင်မင်း (မြောက်ဦးမင်း-
မင်းစောမွန်) လက်ထက် ကတည်း က အခြေချနေထိုင်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း ညီငယ်နဲ့ ကျွန်တော်
သဘောတူကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့- အဲဒီလို အခြေချနေထိုင်ရာမှာ လူဦးရေ အလွန်နည်းခဲ့ကြောင်း
နဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ကျွန်တွေ၊ သုံ့ပန်းတွေ အဖြစ်နဲ့သာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ
နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံသားမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က
၂။ မြေဒူး (မြေတူ) မွတ်စလင် တွေ ဟာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ကနေ ဆင်းသက်လာသူတွေ ဖြစ်တယ်
လို့ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က သမိုင်းပညာရှင် ဦးခင်မောင်စောရဲ့ Religions Of
Arakan စာတမ်းကို အထောက်အထားယူ ကိုးကားရေးသားထားပါတယ်။
၃။ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ ဟာ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ရခိုင်ဒေသကို ကူလီ တွေ အဖြစ်လည်း ဝင်ရောက်
လာ ခဲ့တယ်လို့ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က ဆိုထားပါတယ်။
၄။ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကာလ မှာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ ဟာ ရခိုင်ဒေသကို ဝင်ရောက်အခြေချ
နေထိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ် လို့ ညီငယ်ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ဆိုထားပါတယ်။
၅။ ရခိုင်ဒေသမှာ ခုရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ကိုလိုနီခေတ် နှောင်းပိုင်းမှာ ပြောင်းရွေ့ဝင်ရောက်
လာသူတွေနဲ့ ပါလီမန်ခေတ်မှာ ခိုးဝင်အခြေချလာသူလို့ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်းဆိုထားပါတယ်။
၆။ ရခိုင်တွေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေ အကြား (၁၉၄၂) ခု က ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုန်းအကြောင်း။
၇။ မုဂျာဟစ် ခွဲထွက်ရေး သူပုန်ထမှု အကြောင်း။
အထက် (၇) ချက် က ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ရဲ့ "ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း
အပိုင်း (၁)" note ကို summary ထုတ်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာမှာ
အထက် summary အတိုင်း နံပါတ်စဉ်တွေ အလိုက် ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေ တပ်ပြီးဆွေးနွေးပါ့မယ်။
၁။ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ရခိုင်ဒေသတွင် မြောက်ဦးမင်းလက်ထက် ကတည်း က အခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်း။
ရခိုင်မြောက်ဦးခေတ်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဟာ မင်းစောမွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ ရာစုဦးပိုင်းမှာ မင်းစောမွန်
ဟာ ဘင်္ဂလားဘုရင် စူလ်တန် ဂျလာလုဒ်ဒင်းန် ရဲ့ အကူအညီနဲ့ မြောက်ဦးမြို့ကို ဘင်္ဂလားကနေ
ချီတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသမိုင်းကြောင်း ကို ရခိုင်ရာဇဝင်ဆရာတွေရော
မျက်နှာဖြူပညာရှင်တွေပါ သဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီငယ် မြတ်သိန်းထွန်း က မြောက်ဦး
မြို့ကို စတင် ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ စစ်သုံ့ပန်း / ကျွန်တွေ သာဖြစ်ကြောင်း
ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုထားပေမဲ့ အထောက်အထားပေးမထားပါ။ မြောက်ဦးမြို့ကို စတင်ဝင်
ရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာ စစ်သုံ့ပန်း / ကျွန် တွေ မဟုတ်ကြောင်း အထောက်
(က) ထီးနန်းပြန်ရဖို့ငှါ မင်းစောမွန် ကို ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီစစ်တပ် အမှုထမ်းတွေကို
မြောက်ဦးမြို့ပြင် မှာ မြေ နေရာပေးပြီးအခြေချနေထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ
အဲဒီ အရပ်မှာ စန်ဒီခန်ဗလီ ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရခိုင်သမိုင်းပညာ
ရှင်ကြီး ဒေါက်တာအေးချမ်း က သူ့ရဲ့ "The Development ofaMuslim Enclave in
Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)" သုတေသနစာတမ်း စာ-၃၉၈ မှာ
ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ စစ်သုံ့ပန်း / ကျွန်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မြောက်ဦး
ထီးနန်းတည်ထောင်ရာမှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့သူတွေပါ။
(ခ) မင်းစောမွန်လက်ထက်မှာ ကာဒိရ် ၊ မူစာ၊ ဟနုမြာ အမည်ရတဲ့ ရုမ်ပါသျှာ သံအမတ်ကြီး
သုံးယောက် ဟာ မြောက်ဦးမြို့တော် မှာ လာပြီး အစ္စလာမ်သာသနာကို ဟောပြော
သာသနာပြု ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေမြို့အနှံ့ဆောက်လုပ်ကြလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့
အစ္စလာမ်ဘာသာ ကို ကူးပြောင်းသက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ အတွက် မြောက်ဦးနိုင်ငံတော်
မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်း "ရခိုင်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး" မှာ အရှင်းပါရှိ
ပါတယ်။ စစ်သုံ့ပန်း / ကျွန် တွေရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေကို တော့ ရခိုင်ဘုရင် က ဘာသာ
တရားဟောပြောခွင့် ၊ ဗလီတွေဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးမယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
(ဂ) အဲဒီခေတ်တုန်းက မြောက်ဦးဘုရင့်နန်းတော်မှာစစ်တကောင်းကလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ကဗျာလင်္ကါ
ပညာရှင်တွေ၊ ဘင်္ဂါလီ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ ဝန်းရံလျှက်ရှိပြီး မြောက်ဦးဘုရင်တွေ ကိုယ်တိုင်
က ဘင်္ဂါလီ ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးခံရပြီး၊ ဘင်္ဂါလီစာပေကိုတောင်တရားဝင် နန်းသုံးစာပေ တစ်ရပ်
အဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊ Dr S.B Qanungo ရဲ့ History of Chittagong Volume I စာ-၅၇၁
ကနေ ၅၇၄ အထိ ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
လောလောဆယ် အထောက်အထားအနေနဲ့ အထက်က အကိုး ၃ ခုဘဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ညီငယ် အနေနဲ့ ထပ်မံလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြောပါ။
မြေနေရာ ပေး၊ ဗလီ ဆောက်ခွင့်ပေး ဆိုတော့ အဲဒီတုန်း က ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ
စစ်မှုထမ်း လူဦးရေ ဟာအနည်းဆုံးရာဂဏန်းအဆုံးနီးနီး တော့ရှိမှာပါ။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
အချို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းခဲ့တယ် လို့ ရခိုင်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာ မှတ်တမ်း
တင်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီ ကူးပြောင်းတဲ့အထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေလည်းပါမှာပါ။ မင်းစောမွန်
ရဲ့ စစ်မှုထမ်း တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေ ထိမ်းမြားတာတွေလည်းရှိမှာ
ပါ။ အဲဒီနည်းနဲ့တွက်ချက် ကြည့်လိုက်ရင် မြောက်ဦးခေတ်တစ်ခုလုံးမှာဘင်္ဂါလီတွေ၊ ဘင်္ဂါလီ-
ရခိုင် ကပြားအနွယ်တွေ၊ ဘယ်လောက်များ အလုံးအရင်းနဲ့ရှိလာမလဲ ဆိုတာမှန်းဆကြည့်နိုင်
မြောက်ဦးခေတ် (၁၇ ရာစုဦး) မှာ ရခိုင်တွေဟာ ပေါ်တူဂီပင်လယ်ဓားပြ တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး
ကျွန်အရောင်းအဝယ် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ ပင်လယ်ဓားပြတွေဟာ
ဘင်္ဂလား က ဘင်္ဂါလီလူတန်းစားအစုံကို ရရင်ရသလို ဖမ်းဆီးပြီး ရခိုင်ကို ကျွန်အဖြစ်ခေါ်
လာခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်တွေဟာ ပေါ်တူဂီ တွေဆီ က ကျွန်တွေဝယ်ယူသလို သူတို့ကိုယ်
တိုင်လည်း ဘင်္ဂလားဖက်ကိုသွားပြီး လုယက်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့ အမှုတွေကို
လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ ဘင်္ဂါလီ တွေကို သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာ အလျောက်ရာထူးတာဝန်
တွေ ပေး၊ အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတွင်းရေးရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဘင်္ဂါလီ
ပညာရှင်တွေ ကို ရခိုင်ဘုရင့်နန်းတော်မှာ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့
သလို၊ အချို့ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘုရင့်မှူးကြီးမတ်ရာ ရာထူးတွေကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါ
တယ်။ ပညာမဲ့ ဘင်္ဂါလီ လူတန်းစားအလွှာတွေကိုလည်း သူတို့နဲ့သင့်လျော်ရာ အလုပ်တာ
ဝန်တွေကို ခိုင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။ မြောက်ဦးခေတ်မှာ စစ်တကောင်းအပါအဝင် ဘင်္ဂလားနယ်
အချို့ကို ရခိုင်ဘုရင်တွေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေဟာ
စစ်သုံ့ပန်းတွေ အဖြစ် ရခိုင်ဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသကို မိမိ
သဘောဆန္ဒအလျောက် လာရောက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးကုန်သည် တွေလည်း
ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ကြာလာတော့ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂါလီ အခြေချမှု ဟာ အမြစ်တွယ်ခိုင်မာလာ
ပါတော့တယ်။ အများစုဟာ ကျွန်အနေနဲ့ရောင်းခံခဲ့ရပေမဲ့၊ သုံ့ပန်းတွေအနေနဲ့ ရောက်လာ
ခဲ့ပေမဲ့လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ဟာ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်အခြေချတဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံသား
တွေ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ မြောက်ဦးခေတ် ရခိုင်နိုင်ငံတော်မှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ
လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာလည်းလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ နဲ့ ဖွဲ့တည်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပါ။
၂။ မြေဒူးမွတ်စလင်တွေဟာ ဘင်္ဂါလီ အဆက်အနွယ်တွေလား
မြောက်ဦးခေတ် မင်းဗာဘုရင်လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၁၅၃၃ခုနှစ်မှာ စစ်တကောင်းကို ပြန်
လည် သိမ်းပိုက်ရာကနေ ဖမ်းဆီးမိတဲ့ ဘင်္ဂလီစစ်သုံးပန့်တွေကို သံတွဲမြို့ကို ဘုရားကျွန်
အဖြစ် ခေါ်ယူလာခဲ့တယ်လို့ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က သမိုင်းပညာရှင် ဦးခင်မောင်
စော-ဘာလင် ဆိုသူရဲ့ Religions Of Arakan စာတမ်းကို ကိုးကားရေးသားထားပါတယ်။
အဲဒီစာတမ်းကို လေ့လာကြည့်ပြန်တော့၊ ဟုတ်ပါတယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်းရေးထားသလို
ပါဘဲ၊ ဦးခင်မောင်စောဟာအဲဒီ ဘုရားကျွန် အကြောင်းရေးသားရာမှာ Tydd,W.D,Burma
Gazetteer,Sandoway District, Vol.A,Rangoon,1962 ကို အထောက်အထားပေးရေး
ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် Burma Gazetteer,Sandoway District
အဲဒီလိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်အလွန်အမင်းအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
ဦးခင်မောင်စော ရေးထားတဲ့ "ဘင်္ဂါလီဘုရားကျွန်" အကြောင်းအရာဟာ W.B Tydd ရဲ့
Burma Gazetteer,Sandoway District Volume A မှာ လုံးဝ ကိုမပါရှိလို့ပါ။ မြေဒူးမွတ်စလင်
နဲ့ပတ်သက်လို့ အဲဒီ Gazetteer Chapter III (The People) , page 19 မှာဘာရေးထားလဲ
ဆိုတာ ကျွန်တော်အနည်းငယ် ဘာသာပြန်တင်ပြပေးလိုပါတယ်။
"မြေဒူးလို့အမည်ရတဲ့ အခြားမွတ်စလင် group တစ်ခုကိုတော့ သံတွဲမြို့မှာသာ တွေ့
ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဗမာစကားကို သာပြောကြပြီး၊ သံတွဲမြို့ကို ဗမာတွေသိမ်းပိုက်ခဲ့
တဲ့အချိန်မှာ မြို့စောင့်တပ်အဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင် တွေကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်
တယ်လို့ သူတို့ ဝန်ခံကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ "မြေဒူး"လို့ဘာကြောင့် ဝန်ခံကြ
သလဲဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အထက်အဆက်အနွယ်တွေဟာရွှေဘိုခရိုင် မြေဒူး ကနေ လာရောက်
မြေဒူးမွတ်စလင်တွေ ဟာ ဦးခင်မောင်စောရေးသားထားသလို ဘင်္ဂါလီ အဆက်အနွယ်
တွေမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ Burma Gazetteer, Shwe Bo
District Volume I ကို ကိုးကားပြလိုပါတယ်။
" မြေဒူးမွတ်စလင်တွေရဲ့အထက်အဆက်အနွယ်တွေ ဟာသတိုးဓမ္မရာဇာ သာလွန်မင်း
တရားကြီးလက်ထက် က မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကိုယ်သူ
တို့ ယုံကြည်ကြပေမဲ့၊ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်တာ က တော့ အေဒီ (၁၅၃၈-၁၅၃၉) မှာ ဘုရင့်နောင်
(ကျော်ထင်နော်ရထာ) က ပဲခူးကိုချီတက်လုပ်ကြံရာကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ စစ်သုံ့ပန်း တွေ နဲ့
အေဒီ ၁၅၄၆ မှာ တပင်ရွှေထီးမင်း က ရခိုင်ကိုကျူးကျော်ပြီး သံတွဲကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ
က နေ ရခဲ့တဲ့ စစ်သုံ့ပန်းတွေ ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေဆိုတာပါဘဲ။ ၁၁၆၄ ခုနှစ် သက္ကရာဇ်
စွဲ ပါ သူတို့စစ်တမ်း တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက် အရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ အထက်အဆက်အနွယ်
၂၈၀ ဟာ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်မှာ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် ရခိုင်
နဲ့သံတွဲတို့ကနေ လာရောက်ခဲ့ကြပြီးရွှေဘိုခရိုင်မှာရှိတဲ့ မြေဒူး၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ၊
ဒီပဲယင်း တို့နဲ့ တောင်ငူ ၊ ရမည်းသင်းတို့မှာပါ မြေနေရာချပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့
Chapter III (The People), page 64 မှာ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
အေဒီ (၁၆၁၃) မှာ သန်လျှင်မြို့စား ငဇင်ကာ ငှါးရမ်းခဲ့တဲ့ ကုလားပသီ (၂၀၀၀) ကျော်
ကို အနောက်ဘက်လွန်မင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ ကုလား ပသီတွေကို
ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဖက် နဲ့ အင်းဝမြို့မြောက်ဖက်တို့မှာ အစုခွဲပြီးနေရာချထားခဲ့တယ်လို့
ဆရာမောင်ကျော်ရှင်းရဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်စာပေဗိမာန်စာမူဆုရ "မြေတူမြို့" စာအုပ် စာမျက်
နှာ ၆၀-၆၁ တို့မှာရေးသားထားပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ က မွတ်စလင် (၃၀၀၀) ကျော် အင်းဝဘုရင်ထံဝင်ရောက်ခိုလှုံတယ် ဆိုတဲ့
အချိန် က ခရစ်ခုနှစ် (၁၇၀၈) လောက်မှာပါ။ အဲဒီအချိန်က အင်းဝဘုရင် ဟာ စနေမင်း ပါ။
ရခိုင်ရာဇဝင်ကျမ်းတွေ မှတ်တမ်းတွေမှာလည်း ရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်တွေကို အမျိုးအစားခွဲခြားဖော်ပြရာမှာ ကမန်၊ မြေဒူး မွတ်စလင်၊ ဘင်္ဂါလီ
မွတ်စလင်ရယ်လို့သီးသန့်ခွဲခြားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအထောက်အထားတွေ အရ
သိရတာ က မြေဒူးမွတ်စလင်တွေဟာ မြောက်ဦးဘုရင် မင်းဘင် လက်ထက် က ဖမ်း
ဆီးရမိခဲ့တဲ့ စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ အဆက်နွယ်တွေ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
နောက်တစ်ချက်က သံတွဲ က ဆံတော် အံတော် နံတော် စေတီတွေကို အေဒီ (၈) ရာစု
မှာ တည်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီ Burma Gazetteer, Shwe Bo District Volume I စာ-၁၄
မှာရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီစေတီတွေ ပေါ်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးပါတယ်။
ရောက်တုန်းက လည်း စေတီသမိုင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေထံ ကျကျနန မေးမြန်း
ဆည်းပူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စော စာတမ်းပါ သမိုင်းမျိုးဘယ်သူ့ဆီ က မှ မကြားခဲ့
ဖူးပါ။ ဦးခင်မောင်စော ရဲ့ Religions Of Arakan စာတမ်းပါ မြေဒူးမွတ်စလင်သမိုင်း ဟာ
အထောက်အထားမဲ့ကွန့်မြူးထားတဲ့ ဦးခင်မောင်စောရဲ့ စိတ်ကူးသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။
၃။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် ရခိုင်ဒေသသို့ ဘင်္ဂါလီများရောက်ရှိခြင်း။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အစီအမံနဲ့ ရခိုင်ဒေသကို ကူလီ တွေ အဖြစ်
အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ညီငယ်
ကိုမြတ်သိန်းထွန်းရဲ့ အဆိုကို ကျွန်တော်သဘောတူတဲ့ အတွက် အထွေအထူးပြန်လည်
၄။ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီ ရခိုင်ဒေသသို့ ဘင်္ဂါလီများရောက်ရှိခြင်း။
ဒီအဆိုကိုလည်းဘဲ ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တစ်ခုဆွေး
နွေးချင်ပါတယ်။ "ဌာနေမျိုးနွယ်စု" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုပါ။ "ဌာနေမျိုးနွယ်စု" ဟုတ်
တယ်၊ မဟုတ်ဘူး သတ်မှတ်ရာမှာ ဘယ်လိုခေတ်အချိန်ကာလ ကိုစံ ထားပါသလဲ
ဆိုတာကိုသိလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိတိုင်းရင်းသား
စာရင်းဝင် အားလုံးဟာ မတူညီတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ အစုလိုက် အစုလိုက် မြန်မာ
ပြည် လို့ ယနေ့ခေါ်တဲ့ ဒေသကြီးထဲကို ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြတာ
ဖြစ်ကြောင်း လူသားမျိုးနွယ်ပြန့်နှံ့ပုံသမိုင်းတွေမှာ လေ့လာဖူးလို့ပါ။
၅။ ရခိုင်ဒေသတွင် ယခုနေထိုင်လျှက်ရှိသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ
ကျွန်တော် အထက်မှာ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြခဲ့တာရယ်၊ ညီငယ်ကိုမြတ်
သိန်းထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ဦးစလုံး သဘောတူထားတဲ့ အချက်တွေရယ်ကို ထောက်
ရှုသုံးသပ်လိုက်ရင်ယခု ရခိုင်ပြည်နယ် မှာနေထိုင်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ၊ ဘင်္ဂါလီကပြား တွေ
ထဲမှာ မြောက်ဦးခေတ် ကစလို့ လွတ်လပ်ရေးမရမှီ အထိတောက်လျှောက်ဝင်ရောက်
အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမှာပါ။ တစ်နည်းအား
ဖြင့် ပြောရရင် ယခုနေထိုင်သူဘယ်သူဘယ်ဝါတွေရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေ က ဘယ်တုန်း
ကတည်း က ရခိုင်ဒေသ မှာ အခြေချနေထိုင်လာတာပါလို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ မလွယ်
ကူဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်ဆို ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေဟာ ရခိုင်ဒေသတင်
မက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ တရားဝင်နိုင်ငံသားတွေ အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ကြ၊ နေကြတာ
ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ဒေသမှာ ခုနေနေကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အားလုံးဟာ ကိုလိုနီခေတ်
နဲ့ ကိုလိုနီခေတ် နောက်ပိုင်းမှာ မှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေပါလို့ပြောဖို့
ရာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူတွေ က တော့တရားဝင် ၊ ဘယ်သူတွေ က တော့တရား
မဝင် အဲဒါကို နိုင်ငံတော်အနေနဲ့စနစ်တကျ ဆုံးဖြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တရားမဝင်
ဝင်လာတဲ့သူတွေ နဲ့ပတ်သက်လို့ တာဝန်အရှိဆုံး က သက်ဆိုင်ရာ ကာလတွေမှာ
အဲဒီဒေသမှာ တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေး နဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာထမ်း
အမှုထမ်းတွေပါ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အဖြစ်တာဝန် ယူခဲ့သူတွေ မှာလည်း ကြီးမားတဲ့
တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ က
လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ တစ်ရပ်မဟုတ်တဲ့ အပြင်၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲကို ဝင်ပြီး အခြေချနေထိုင်
ဖို့ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက် သဘောတူညီချက် မပါဘဲ လုံးဝ ကိုမဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
၆။ ရခိုင်တွေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေ အကြား (၁၉၄၂) ခု က ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုန်း
၁၉၄၂ ဝန်းကျင် ရခိုင်ဒေသမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ နဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ အကြားအဓိကရုန်း
ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန်တော်နဲ့ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း တို့
နှစ်ဦးစလုံး သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီ အဓိကရုန်း အကြောင်းကို ကိုမြတ်
သိန်းထွန်း က "ကိုရဲရင့်သစ္စာသို့ ပြန်ကြားချက် (၁)" note မှာ အစပြုရေးသားခဲ့တာ
အမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရေးသားရာမှာ ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က ဘင်္ဂါလီ
တွေက စပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ်ရွာမီးရှို့လုပ်ခဲ့လို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ "အလ္လာ"
နာမတော်ကို နာကျည်းပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားခြင်းအမှုမြစ်ဖျားခံလာတာလို့
ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆိုလိုရင်း ကို ကျွန်တော် က "ပါးစပ်ရာဇဝင်" လို့ သညာတပ်ခဲ့တာပါ။
သဘောက ဘင်္ဂါလီ တွေ က ရခိုင်တွေကို စကျူးလွန်တာလို့ယူဆလို့မရသလို၊ ရခိုင်
တွေ က ဘင်္ဂါလီ တွေကို စကျူးလွန်တာလို့လည်း ပြောမရပါ၊ ဒါကြောင့် တစ်ကယ်လို့
တစ်ယောက်ယောက် က အဲဒီ အဓိကရုန်းကို ရည်ရွယ်ပြီးရခိုင်က စလုပ်တာ (သို့)
ဘင်္ဂါလီ က စလုပ်တာ လို့ပြောလာရင် အထောက်အထားမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ပါးစပ်
ရာဇဝင် လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ ဂျူးသုတေသီ ပညာရှင်မိုရှေယေဂါရ် က ရခိုင်တွေ စကျူး
လွန်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုထားပြီး၊ Rakhine State People's Council 1986 : ၃၆
မှာတော့ ဘင်္ဂါလီ တွေ စကျူးလွန်လို့ ရခိုင်တွေက လက်တုန့်ပြန်ရတာလို့ ရေးသား
ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲဒီ အဓိကရုန်း မှာနှစ်ဖက်စလုံး က ခေတ်မှီလက်နက်
(သေနတ်၊ ဗုံး စသည့်) ကိုင် ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါးစပ်ရာဇဝင် ဆိုတာ အဲဒီ အဓိကရုန်း
ကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ အဲဒီ အဓိကရုန်း ရဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့် ဘင်္ဂါလီတွေ နဲ့
ရခိုင်တွေ လက်နက်ရကြတဲ့ အခါ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ခါးခါးသီးသီးလက်နက်ကိုင်
တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ခဲ့ကြတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီ လူနည်းစု ဒေသ တွေမှာ ရခိုင်
တွေ ရဲ့သတ်ဖြတ်မှုကို ဘင်္ဂါလီတွေခံခဲ့ရသလို၊ ဘင်္ဂါလီ လူများစု ဒေသတွေမှာ ဘင်္ဂါလီ
တွေ ရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီအပြန်အလှန် အကြမ်း
ဖက်သတ်ဖြတ်မှုမှာ နှစ်ဖက်အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ အတော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့
ရသလို၊ ညီငယ်ကိုမြတ်သိန်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘုရား ကျောင်းကန်စေတီ ပုထိုး
တွေ၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေ ၊ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေ ဖျက်စီးခံခဲ့ရမှာ ဧကန်
ပါဘဲ။ အဲဒီ အဓိကရုန်းတွေကို ဘယ်သူကဘဲ စ စ၊ အလွန်ကိုကြေကွဲဖွယ်ရာ ကောင်း
တဲ့ အပျက်အမှုကြီးပါ။ (စကားညှပ်-အဲဒီ လို ဆိုးဝါးလှတဲ့ အပျက်အမှုတွေကို သင်ခန်း
စာ ယူရကောင်းမှန်းမသိဘဲ၂၀၁၂ ဇွန်လ အတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပျက်မှုတွေ ကို ကျူးလွန်
ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂါလီတွေ ဘယ်တော့များမှ အသိတရားရကြမလဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။)
အဲဒီ အဓိကရုန်း ကို ရခိုင်တွေ က လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းလို့ ခံယူကြပြီး၊ ဘင်္ဂါလီတွေ
က ဘာသာရေးအဓိကရုန်း အဖြစ် ခံယူကြတယ်လို့ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း
သုံးသပ်သွားတာ သိရပါတယ်။ ဒါလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဘင်္ဂါလီတွေ က ရခိုင်
တွေကို သတ်တဲ့အခါ ဘုရားစာ ရွတ်ပြီးမှ သတ်တယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်
ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီ တွေက သူတို့ ဘာသာသာသနာစော်ကားခံရတဲ့ အတွက် သေတယ်၊
ပြန်သတ်တယ်လို့ခံယူထားတာကြောင့် ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ ရခိုင်တွေ က ဘင်္ဂါလီ တွေကို
သတ်တဲ့ အခါမှာတော့ သံဗုဒ္ဓေ မရွတ်ဘူး ဆိုတာတော့ အသေအချာကို ဖြစ်မှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ က ဘယ်အသက်ကို ဘယ်လိုကြောင့်သတ်သတ်
အပြစ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတွက် ပါ။ မိမိ ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ရာ မလွဲ
မရှောင်သာ အသက်သတ်ခြင်းကိုတောင်အပြစ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို
ယုံကြည်ကြတဲ့ ရခိုင်တွေဟာ ဘာသာတရားအဆုံးအမကိုတောင် ဂရုမမူနိုင်ဘဲ
ဆန့်ကျင်ပြုမူခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ရခိုင်တွေရဲ့ အမုန်းတရား၊ အငြိုးအာဃာတ ကြီးမားပုံကို
မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီ တွေလည်း တောင်ပိုင်းမှာသူတို့ ခံရတာ ကို မြောက်ပိုင်းမှာ
ပြန်လက်တုန့်ပြန်ခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အမုန်းတရား အငြှိုးအာဃာတ တွေလည်း
မသေးကြောင်းသိရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ အဓိကရုန်းမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ က ရခိုင်တွေကို
ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အဆိုကို
တော့ ကျွန်တော် သဘောမတူပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ သူတို့ ခံခဲ့ရတာကို လက်တုန့်
ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာ လူနည်းစုရခိုင်တွေ ကို သတ်ဖြတ် ရွာမီးရှို့တန်ပြန်လုပ်ခဲ့ကြ
တာလို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။ ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂါလီဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ဆိုင်ရာ ဘာသာ
တရားအဆုံးအမတွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာမယ် ဆိုရင် ဒီလို အပြန်အလှန်မုန်းတီး
သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကနေ အဝေးဆုံး မှာနေနိုင်ကြမှာပါ။
အဲဒီ အဓိကရုန်း ဖြစ်ရတာဟာ ဘင်္ဂါလီ တွေ က Islamist State ဖြစ်အောင် နည်းမျိုး
စုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အတွက် ရခိုင်တွေနဲ့ မကျေမလည်ဖြစ်ရာကစတင်ခဲ့တယ်လို့ ညီငယ်
ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ ညီငယ် က ၁၉၄၂ အဓိကရုန်းနဲ့ မူဂျာ
ဟစ်သူပုန်ထမှု တို့ကို ရောပြီး သုံးသပ်သွားတာလို့ မြင်ပါတယ်။ မူဂျာဟစ်သူပုန်ထမှု နဲ့
ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အောက်မှာရေးသားပြပါ့မယ်။
၁၉၄၇ အကုန်မှာ စခေါင်းထောင်လာခဲ့ တဲ့ မူဂျာဟစ်လှုပ်ရှားမှု ကို ကျွန်တော် က တိုင်း
ပြည်တစ်ခုမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသူပုန်ထမှုလို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်
တိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ သူပုန်ထမှုတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် လူမျိုးရေး
ကို အခြေခံတာဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ ဘာသာရေးကိုအခြေခံတာဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆ
တစ်ခုခု ကို အခြေခံတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ပါဘဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် က
"တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့" လို့ရည်ညွှန်းရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ
သူပုန်ထမှုကို ကျွန်တော် သာမန်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုအဖြစ်သုံးနှုန်းညွှန်းဆို
ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း က ရခိုင်ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှု
ကို "တော်လှန်ရေး" လို့ သုံးနှုန်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရခိုင်ခွဲ
ထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု ကို "တော်လှန်ရေး" လို့ မမြင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ပဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့
ပုန်ကန် မှု လို့ဘဲ မြင်ပါတယ်။ ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂါလီ ဖြစ်ဖြစ် သီးခြားလွတ်လပ်ရေးတောင်း
ဆို တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ဘယ်လိုဘဲ ကွဲကွဲ ရလဒ် က တော့ အတူတူပါဘဲ။
မုဂျာဟစ် လှုပ်ရှားသူ သူပုန်တွေ ဟာ ၁၉၄၂ က အစပြုခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာ
ရေးမုန်းတီးမှု ကို မြင်ခဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ရဲ့ ခံစားချက် ကို အသုံးချ၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲ
(ဂျိဟာဒ်) အသွင် ဝါဒဖြန့်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့တဲ့ မုဂျာဟစ်ဆိုသူတွေ
ထဲမှာ ဖက်လိပ်ရွာသား ထွန်းအောင်ဖြူဆိုတဲ့ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က မုဂျာဟစ်သူပုန်
ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နဲ့မုဂျာဟစ်ပါတီ ရဲ့ နာယက အဆင့်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောရင်
ညီငယ်အလွယ်တကူလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားမူဂျာဟစ် အဖွဲ့တွေ အပေါ် အနိုင်ယူ
ပြီး မုဂျာဟစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ "ကာဆိမ်" နဲ့ အဖွဲ့ကို ဘူးသီးတောင် မှာရှိကြတဲ့
ဘင်္ဂါလီ တွေ က ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆန့်ကျင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဘူးသီးတောင်မှာ နေကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ
မွတ်စလင် တွေနဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ပူးပေါင်းပြီး မုဂျာဟစ် ကာဆိမ် ဂိုဏ်းကိုနှိမ်နင်းဖို့
အတွက် ရခိုင် နဲ့ဘင်္ဂါလီတို့အညီအမျှ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့
ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း စတာတွေကိုညီငယ် မသိသေးဘူးထင်ပါတယ်။ ညီငယ် က ရခိုင်မှာ
ရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်အားလုံး က မုဂျာဟစ် သူပုန် အဖွဲ့ကို အားပေးထောက်ခံခဲ့တယ်
လို့ ထင်မြင်နေတာဟာအလွန်ကိုမှားယွင်းနေကြောင်း ပြောပါရစေ။ အထက်မှာ ကျွန်တော်
ပြောခဲ့တာတွေ ဟာ ဟုတ်မဟုတ်ညီငယ် အနေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချင်မှာပါဘဲ။ ရခိုင်
အမျိုးသားတွေ ပြုစုထားတဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် သမိုင်းဖြစ်စဉ် ကို ဖတ်ရှုပါ ညီငယ်။
ညီငယ် က မုဂျာဟစ် သူပုန် နဲ့ ရခိုင်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု မတူညီကြောင်း ဥပမာလေး
ပေးပြီး ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ ဥပမာလေးက ကောင်းပါတယ်။ညီငယ်ရဲ့ ဥပမာလေးကို ဘဲ
ကျောရိုးပြုပြီး ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ပြချင်ပါတယ်။ သို့သော်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြော
ချင်တော့တဲ့ အတွက်…. မုဂျာဟစ်အကြောင်း အကိုးအကား ပြုထားတဲ့ "ဘူးသီးတောင်မြို့
နယ် သမိုင်းဖြစ်စဉ်" ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါဗျာ။
ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ရဲ့ "ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၁)" note
နောက်ဆုံး အပိုဒ်မှာရေးသားထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီအားလုံး က အစ္စလာမ်
ဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး မလျော်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန်တယ်လို့ ညီငယ်က ခံယူ
ထားတာသိရပါတယ်။ မုဂျာဟစ်သူပုန်ထမှု က အစပြုပြီး တိုင်းပြည်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း
ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အရေအတွက်နဲ့ယှဉ်လိုက်
ရင် မပြောပလောက်တဲ့ အရေအတွက်ပါ။ ဘင်္ဂါလီ တစ်စုကြောင့် ဘင်္ဂါလီအားလုံး၊ အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်အားလုံး ကို ဆေးရောင်တစ်ရောင်ထဲခြယ်မှုန်းလို့မဖြစ်နိုင်သလို၊ တိုင်းပြည်
ပျက်စီးရာပျက်စီး ကြောင်းပြုနေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတစ်စု ၊ တောင်ကုတ်မှာ မင်းမဲ့စရိုက်ပြုမူ
ခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးလူဆိုး တစ်စုကြောင့် ရခိုင်တွေအားလုံးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံး
ကို same container ထဲထည့်လိုက်လို့ မရပါဘူး။ ၂၀၀၇ သံဃာတော်တွေစီတန်း မေတ္တာ
ပို့ပွဲ မှာ ရန်ကုန်မြို့ဆူးလေဘုရား အနီးက ဘင်္ဂါလီ ဗလီ မျက်နှာစာ ကို အမှီပြုပြီး သံဃာ
တော် တွေကို အစားအသောက်၊ ရေသန့် ၊ အအေး ကပ်လှုခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ကျွန်တော်
ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်တွေ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၈၈ က ဆူးလေစေတီအနီး စစ်တပ် က ပစ်ခတ်
လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျောင်းသားပြည်သူတွေ နဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘင်္ဂါလီဗလီ ထဲ
ခိုလှုံခွင့်ပေးစောင့်ရှောက်ခဲ့သူ ထဲမှာ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေ ဘင်္ဂါလီလူငယ် တွေပါပါတယ်။ ညီငယ်
မမှီဘူးဆိုရင်မှီသူတွေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်ပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်၊ တစ်ကယ်လို့များ
မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်ပြီး "ပါကစ္စတန်ဇင်ဒါဘားသ်" (အရှေ့ပါကစ္စတန်အဓွန့်ရှည်ပါစေ)
လို့ အော်ခဲ့ကြတဲ့ မုဂျာဟစ်သူပုန် လို ပြည်ဖျက်လောက်ကောင် တွေ ပေါ်လာရင် အဲဒီ
လူတွေကို အမြစ်ကနေလှန်ဖို့ တာဝန် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင် တွေ ပုခုံးထမ်း
ပါရစေ။ ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်းရဲ့ "ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂)"
note ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
ကိုမြတ်သိန်းထွန်းဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပ
1) Shy Person.
2) Impudent Person.
One who farts loud and then laughs.
3) Nervous Person.
4) Honest Person.
One who admits he's farted but offers good medical reasons.
5) Dishonest Person.
One who farts and blames his dog.
6) Foolish Person.
One who suppressesafart for hours.
7) Thrifty Person.
One who always has farts in reserve.
8) Anti-social Person.
One who excuses himself and farts in private.
9) Strategic Person.
One who conceals his farts by loud laughing.
10) Athletic Person.
One who farts at the slightest exertion.
11) Intellectual Person.
One who can determine the smell of his neighbour's farts.
12) Sadistic Person.
One who farts and then fluffs the covers over his bed mate.
13) Sensitive Person.
One who farts and then starts crying.
14) Aquatic Person.
One who farts in the bath and bursts the bubbles with his toes.
15) Musical Person.
One who farts in ascending fourths and hears in perfect pitch.
-Unknown Author who's probably farting Unknowingly-
:-) Havealovely Saturday!
Posted: 13 Jul 2012 08:54 PM PDT
If you're planning to throwabirthday party for your kid and want to prepare party packs, just hop over to MK Snack Food at Pemborong & Peruncit MK Snack Food Sdn Bhd. Jalan Pasar 1/21, Old Town, PJ (Jalan Pasar 1/21), Petaling Jaya, Selangor.
It'saplace that sellsalot of stuff that you can put inaparty pack, even non-food items.
You can call ita'Miscellaneous Shop'. ;)
Shopping here is much cheaper than shopping at hypermarkets like Giant, Carrefour etc. ;)
Photos taken using HTC Desire X - free phone from Maxis.
Posted: 13 Jul 2012 06:49 PM PDT
"Saya hanya jawab 'saya akan jawab' di mahkamah ketika disoalsiasat oleh polis.
"Di bawah Seksyen 112 Prosedur Siasatan Jenayah, Kita mempunyai hak untuk tidak menjawab sekiranya jawapan kita boleh digunakan untuk mendakwa kita.
"Saya tidak menjawab satu soalan pun," kata Rafizi dalam perbualan telefon bersama The Malaysian Insider sebentar tadi.
"Selepas ini pihak polis akan menyerahkan notis untuk dapatkan dokumen asli.
"Dibawah Akta Rahsia Rasmi (OSA), polis mempunyai hak untuk berbuat begitu," kata Rafizi lagi.